Davido tsara amin'ny fanandramana Covid-19 dia mangataka vavaka - teles relay
Ilay mpihira malaza sy mpamoron-kira malaza Nizeriana David Adedeji Adeleke, izay antsoina koa hoe Davido, dia nangataka ireo mpankafy azy hivavaka ho azy rehefa hita ho tsara ho an'ny coronavirus (Covid-19).
Davido tao anaty lahatsoratra momba ny tantarany avy hatrany, niangavy ny mpankafy rehetra mba hahatsiaro azy amin'ny vavaka ataon'izy ireo hamonjy ny ainy amin'ny otrikaretina mahafaty izay mamono olona.
Davido sy ny sakaizany Chioma nitsangatsangana tany Eropa nandritra ny areti-mifindra. Tsaroanay fa nanambara ny valin'ny sipa sakaizany avy tany Covid-19 i Davido nandritra ny fitsapana. Nankany amin'ny pejin'ny media sosialy izy mba hampitana ilay hafatra izay nanandratan'i Chioma tsara ho an'ny Covid-19.
Talohan'ny valin'ny Chioma dia nanao fitsapana i Davido izay nanaporofo koa fa voan'ny virus io. Na dia mbola fantatra aza ny valin'ny zanany lahy Ifeanyi, dia maro ny faniriana tsy tsara.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/davido-demande-des-prieres-alors-quil-se-montre-positif-pour-covid-19/
sarin'ny fasan'i Michael Jackson mitovy amin'ny efitrano fatoriana